Umbono weNkampani- Anshun AKF Medical Technology Co, Ltd.
Njengenkokeli malunga nomzi mveliso wempahla, i-AKF ijolise ekubeni yenye yezona zinto zinefuthe kakhulu kwicandelo leemveliso zonyango kwaye ibonelele abathengi ngetekhnoloji yesuperb kunye neenkonzo ezilungileyo. Sijonge phambili ekunxibelelaneni nawe kwisicelo sehlabathi jikelele kwaye sixoxe ngenkqubela phambili yamva nje yorhwebo kunye nezisombululo kulo bhubhane.
I-AKF iya kugxila kubume bayo obuphambili kwicandelo leemaski zokukhusela ezilahlayo, yenze ixabiso elikhethekileyo kubathengi abaxhamlayo kunye nezisombululo zenkqubo kunye nezinye iinkonzo ezongezwe ngexabiso, kwaye ibe lilungu elingenakubekwa endaweni yamashishini aphawula ibhentshi kwihlabathi kwicandelo lezonyango Sithatha umxholo wokusombulula iingxaki zomsebenzisi kunye nokwenza ukuba abasebenzisi babe lula.
Ukusukela ii-AKF "ngamava abathengi". ukungaqondi kunye nokuhlangabezana neemfuno zabathengi kwimeko engenamdla. Sikholelwa ngokuqinisekileyo ukuba kuphela kubuchule obunzulu bobuchwephesha obunokuthi ulti-ngokulingeneyo boyise ukuthembakala kwexesha elide kubathengi kwicandelo lobuchwephesha.
UMNQOPHISO WOMBONO -
Njengoko sonke sisazi, ukonakaliswa kwendalo kubangele ungcoliseko lomoya kunye nokusetyenziswa gwenxa kwebacteria.Inani labantu minyaka le lokusweleka kwezifo zokuphefumla kunye nosulelo lwe-bacte-rial ligqitha kwizigidi ezingama-20 emhlabeni. Iimaski ziye zaba yimveliso ebalulekileyo kulo bhubhane. Kule meko, idlale indima ebalulekileyo ekulweni i -2019-coronavirus. Imaski elahlwayo ye-AKF kunye ne-kn95 mask zizindlela ezimbini eziphambili zokuphelisa umonakalo kwimpilo yabantu ebangelwa ziintsholongwane, iintsholongwane kunye nezinto ezingcolisa umoya ngokuhlasela ulusu kunye nokuphefumla ukuphefumla. Bangabagcini bempilo yoluntu.
Inkampani yaqala ukuza kumzi-mveliso wemaski kwinqanaba lokuqala lokuqhambuka kwesifo, kwaye yenyuka ngokukhawuleza phantsi kweemeko ezinzima kakhulu. Okwangoku, iimaski zothotho lwe-AKF bezisiza kwimarike ngesixa esikhulu, zibonelela ngeemveliso ezigqwesileyo kuluntu ukumelana nobhubhane kunye nokukhusela impilo.
I-AKF igxile kwiimfuno zabathengi kunye nemiceli mngeni, ukubonelela ngeemveliso zonyango ezizezakho kunye nezisombululo kubathengi bethu ngokusebenzisa i-Consistent inno-vation kunye nokuphendula ngokukhawuleza, zonke zenza ukuba abathengi babe namava onxibelelwano olusebenzayo nolunokuthenjwa.
I-AKF ithatha iimfuno zabathengi njengoxanduva lwayo, kwaye iyaqhubeka nokuphucula ubungcali ngotyalo-mali lwe-R & D, ukuqonda imiceli mngeni ejongene ne-cus-tomers kwindawo yoqhakamshelwano lobuchwephesha rhoqo kunye nokubeka phambili iithagethi, kunye nokuba yingcali yoSombululo.